China Carburizer ifektri kanye nabaphakeli | Hexi
I-graphite powder yokufakelwa, i-graphite powder yemvelo kanye ne-graphite scrap ingasetshenziswa njenge-ejenti ye-carburizing. Sikhipha kakhulu i-graphite powder yokufakelwa kanye ne-graphite scrap
1, Zokwenziwa graphite powder, owaziwa nangokuthi graphite yokufakelwa, ikhiqizwa ngesikhathi ukucutshungulwa graphite electrode futhi kungokwalabo by-umkhiqizo wayo. Ngaphezu kwalokho, i-graphite powder ingatholwa ngokubala i-petroleum coke powder ezingeni lokushisa elithile bese iyifaka. I-graphite powder inokusebenza okuphezulu, ukusetshenziswa okubanzi, ukusebenza okuhle kokuthambisa nokuqhuba ngamandla kagesi. Ezimweni eziningi, i-graphite powder isetshenziswa njenge-carburizing agent ukukhulisa okuqukethwe kwekhabhoni kwemikhiqizo. I-graphite powder ekhiqizwa inkampani yethu ingasetshenziswa ekwenzeni insimbi, isinciphisi sejubane nesisekelo, futhi isetshenziswa kakhulu embonini yokuvikela umlilo, futhi ingasetshenziswa njengamabhethri noma amabhuleki amabhuleki.
Izici ze-graphite powder: ukuqhutshwa kwamandla kagesi nokushisa okuqinile, ubumsulwa obuphakeme nesakhiwo samakristalu aphezulu, ukuzinza okuqinile (ama-molecule ekhabhoni ahlala engashintshi ekushiseni okuphezulu), kanye nokuthambisa okuphezulu.
I-Hexi Carbon inesipiliyoni seminyaka eminingi ekukhiqizeni izinto ze-graphite, ezihola ekucubunguleni ubuchwepheshe nasekuphakameni kokusebenza kwezindleko. I-workshop ekhiqiza i-graphite powder inganikeza i-graphite powder esezingeni eliphakeme (ukuhlanzeka okuphezulu, i-graphite powder ejwayelekile ne-ultra-fine) ngobumbudumbudu obuhlukile ngokuya ngezidingo zamakhasimende, futhi izinkomba zomzimba nezamakhemikhali zemikhiqizo zeqa izinga lesilinganiso embonini.
Ukucaciswa Kwe-Graphite Powder
Ukucaciswa Kwe-Graphite Scrap
Langaphambilini I-Graphite Tile
Olandelayo: I-Graphite Rod neCarbon Rod